एक वर्षमा सबैभन्दा बढी सेयर भाउ बढ्ने १० कम्पनीहरु कुन–कुन होलान् ?
काठमाडौं : साउन १ गते अर्थात शुक्रबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नेपाली नयाँ वर्ष वैशाखबाट सुरु हुने भए पनि आर्थिक वर्ष भने साउनबाट मात्र सुरुवात हुन्छ । यसर्थ, बजेट कार्यान्वयन हुनेदेखि अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरुको हिसाब साउन १ गतेबाट नै प्रारम्भ हुन्छ र असार मसान्तमा गएर टुंगिन्छ । यसैबीच सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि पनि नयाँ आर्थिक वर्षले निकै महत्व राख्छ ।
किन भने साउन लाग्ने बित्तिकै सूचीकृत कम्पनीहरुले वर्षभरिमा गरेका नाफा वा घाटाका समेत विवरणहरु आउन थाल्छ । त्यसपछि लाभांश घोषणा र साधारण सभाको माहोल सुरु हुन्छ । यस्तै, हाम्रो सेयर बजारमा पनि यही बेला विशेष रौनक आउने गरेको विगतका उदाहरणहरु छन् । बुल बजारले अधिकांश समयमा नयाँ रेकर्डहरु बनाउने सिजन पनि साउन–भदौ नै हुने गरेको छ । यस हिसाबले पनि पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु अझै उत्साहित भएर हेरिरहेका हुन्छन् ।
यसैसन्दर्भमा बितेको एक आर्थिक वर्ष अर्थात १ वर्ष (साउन १ गतेदेखि असार अन्तिम दिन) मा सेयर बजारमा सूचीकृत कुन कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा धेरै कमाए होलान् ? यस्तै, सबैभन्दा बढी सेयर भाउ बढ्ने प्रमुख १० कम्पनी कुन–कुन होलान् ? अनि ती कम्पनीहरुको भाउ कति–कति प्रतिशतले वृद्धि भयो होला ? भन्ने आम लगानीकर्ताका लागि निकै चासोको विषय हुन सक्छ ।
यसैक्रममा हामीले गएको १ आर्थिक वर्ष (एक वर्ष) मा सबैभन्दा बढी भाउ बढ्ने कम्पनीहरु खोजी गरेका छौं । हाम्रो अध्ययन अनुसार यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै गोर्खाज फाइनान्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । गोर्खाजको फाइनान्सको भाउ यसअवधिमा ११ सय २९ रुपैयाँ बढेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा यसका लगानीकर्ताले ९३३.०६% कमाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिन र अन्तिम कारोबार दिनलाई आधार मानेर यो तथ्यांक निकालिएको हो । १ वर्षको अवधिमा सर्वाधिक कमाउने १० कम्पनीमध्ये एउटा फाइनान्स कम्पनी (गोर्खाज फाइनान्स) र बाँकी ९ वटै हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।
यसरी धेरै कमाउनेमा दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः युनियन हाइड्रोपावर र रिडी हाइड्रोपावर रहेका छन् । यस्तै, गुमाउनेमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एसबीआई बैंकका लगानीकर्ता देखिएका छन् । म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चरसहित हेर्दा नेप्सेमा कुल २९१ कम्पनी सूचीकृत भएको छ ।
नोट : अध्ययनमा सोही वर्ष आइपीओ जारी गरेर सूचीकृत भएका र मर्ज–एक्विजिसनबाट सेयर कारोबार खुलेका कम्पनी समावेश गरिएको छैन ।
घोडीघोडा लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नाफा १९२.८८% ले बढ्यो
सानिमा लाइफको आइपीओमा यसरी लाग्यो आवेदकको ओइरो
अब बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनेछन् : अर्थमन्त्री